Tanjona moa ny hanapariahana amin’ny Malagasy rehetra ny lalàna sasantsasany mifehy ny fianakaviana, indrindra fa amin’ny teny Malagasy. Mba ho fisorohana ny faharavan’ny tokantrano Malagasy raha toa ka mbola misy izay azo atao, sady hisorohana koa ny herisetra ao an-tokantrano. Tsiahivina fa efa asa fanaon’ity fikambanana ity ny fampiofanana maimaimpoana ireo tanora izay vonona hiroso amin’ny fanambadiana ho fisorohana ny herisetra ao an-tokantrano, vatsian’ny Vondrona Eoropeanina. Efa nahatratra 9 700 isa ireo olona nahavita fiofanana niaraka tamin’izy ireo. Efa vita koa ny boky torolalana voalohany ho fisarahana ny herisetra sy fampahafantarana ny andraikitra miandry ao an-tokantrano, koa boky efa 8 000 isa koa no efa voazara maimaimpoana ary mbola misy 2 000 isa hozaraina amin’ny fotoam-pampiofanana manaraka.